चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने ? — SuchanaKendra.Com
चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने ?
नेपाल बार एशोसिएसन अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई आज सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने तयारीमा छन् । त्यसका लागि विहान ९ः३० बजेबाटै कानुन व्यवसायीहरु बारमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने तयारीमा धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने उनको भनाइ छ । यता सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीहरुलाई धर्नास्थल नै जान नदिने रणनीति बनाएको छ । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा सर्वोच्च बाहिर दंगा नियन्त्रणका उपकरणसहित प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
विहीबार कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ६ जना कानुन व्यवसायीहरु घाइते भएका थिए ।रातोपाटी बाट शाभार.